Kuratidza zvinyorwa neelebheri date kuchera
Orange 3 - Vhura gadziriro yemuchina wekudzidza uye data yekuona kweavoice uye nyanzvi
Open mabviro muchina kudzidza uye kuona data kwema noices uye nyanzvi. Inopindirana dhata yekuongorora data inoenderera pamwe neyakagadzirirwa zvishandiso.
Inopindirana dhata kuona Ita zviri nyore kuongororwa kwedata ne smart data kuona. Ongorora kugovera kwehumwe, machati emuchadenga uye kuparadzira machati kana kunyura zvakadzika mumiti yesarudzo, nzvimbo yekutungamira yemamepu, mamepu ekupisa, MDS, uye mutsara wekutenderera. Kunyangwe yako multidimensional data inogona kuva 2D inotapira, kunyanya nehungwaru hunhu kuongororwa uye kusarudzwa.
Visual programming: Inotsvagisa data yekutsvaga nekukurumidza, yakakodzera kuongororwa pamwe yakajeka visualizations. Iyo graphical mushandisi interface inokubvumira kuti utarise kuputika kwekuongorora data panzvimbo yekunyorera, nepo smart defaults ichiita kuti ikurumidze kugadzira prototypes ako ekuongorora data workflow zvakanyanya nyore. Isa mabhajeti pachiratidziro, awabatanidze, mutoro wedhi data uye uwane kutarisisa!
Wedzera-ons zvinowedzera kushanda: Nezvinhu zvakasiyana siyana zvinowanikwa mu…